Xog dhameystiran macquul maaha | Martech Zone
Xog dhameystiran waa mid aan macquul aheyn
Axad, Disembar 23, 2012 Axad, Disembar 23, 2012 Cody Sharp
Suuqgeynta xilligan casriga ah waa wax qosol badan; halka ololeyaasha suuqgeynta ku saleysan websaydhku ay aad uga fudud yihiin raadraaca marka loo eego ololeyaasha dhaqameed, waxaa jira macluumaad badan oo la heli karo oo dadka ku curyaami kara iyagoo raadinaya xog dheeri ah iyo 100% macluumaad sax ah. Qaar ka mid ah, qadarka waqtiga ee lagu kaydin karo inay awoodaan inay si dhakhso leh u ogaadaan tirada dadka arkay xayeysiintooda internetka inta lagu jiro bil gudaheeda waa la diidey waqtiga ay ku bixinayaan isku dayga inay arkaan sababta nambarada taraafikada ay u kordhin la’yihiin.
Ka sokow awood la'aanta xogta dhammeystiran, waxaa sidoo kale jira xaddiga xogta dhibta leh. Xaqiiqdii, wax badan ayaa jira oo mararka qaarkood ay adkaan karto in la arko keynta geedaha. Ma inaan u baahanahay inaan fiiriyo heerka soo-kabashada ama heerka bixitaanka? Sure, qiimaha bogga waa shey qiimo leh oo qiimo leh, laakiin ma jiraan wax ka beddelasho wanaagsan oo qaabeyn kara inta ay le'eg tahay bogga la siinayo ee ku habboon dhammaystirka yoolka internetka? Su’aaluhu waa kuwo aan dhammaad lahayn waana jawaabahooda. Khabiir ayaa laga yaabaa inuu kuu sheego, "waxay ku xiran tahay uun", laakiin qof madaxiisa ku jira ceeryaanta dhijitaalka ah Analytics waxay u maleyn kartaa inay jiraan tiro dhameystiran haddii ay kaliya wax ka wada eegaan.
Labadan qayboodba, jawaabtu waa fududahay - samee ku samee cillad la'aan maxaa yeelay xog dhammaystiran iyo / ama xog dhammaystiran macquul maaha. Mid ka mid ah ragga sida wanaagsan uga hadlaya arrintan ayaa ah Avinash Kaushik. haddii aadan magaca aqoon, isagu waa a New York Times farshaxanka ugu iibsiga badan, mid ka mid ah ragga madaxa ka ah Google wuxuuna ka mid yahay guddiga dhowr Jaamacadood. Blog-kiisa, 'Occam's Razor', waa dahab saafi ah oo loogu talagalay falanqeeyaha xogta casriga ah waxaanan dhawaan ku soo galay mid ka mid ah qoraalladiisii ​​hore ee la magacaabay, Nidaam 6 Tallaabo ah oo lagu Kordhinayo Moodelkaaga Maskaxeed. Dhexdeeda, wuxuu ku qeexayaa fikradda ah inaysan jirin xog dhammaystiran oo dadku u baahan yihiin inay raacaan waddo aad u fudud oo loo maro "Xogta Hufan".
Dhammaan qodobbada waaweyn ee uu tilmaamo, midka ugu badan ee meesha ka baxa waa:
… Shaqadaadu kuma xirna xogta leh 100% daacadnimada shabakadda. Shaqadaadu waxay kuxirantahay inaad ka caawiso shirkadaada Dhaqdhaqaaq Dhaqso ah una fikir Smart.
Marka xigta ee aad rarto Falanqaynta, kaliya xusuusnow in haddii aad ku shaqeyneyso xog wanaagsan oo aad raacday habka ugu fiican, waa inaad diyaar u noqotaa inaad go'aan ka gaarto sidaad horay ugu socon lahayd. Sababtoo ah iyada oo aan loo eegin dadaallada gargantuan ee aad u shaqeysan karto raadinta xog dhameystiran oo qumman, waqtiga aad ku qaadatay inaad ku sameyso waxay ku qaadan laheyd inaad ka shaqeyso heerarka beddelashada, sameynta imtixaan cusub oo kala jaban, iwm. Waad ogtahay, waxyaabaha caawin doona shirkaddaada koro oo shaqadaada hayso.
Marabtaa inaad bilowdo wada hadal? Ii soo gaadh Twitter-ka @sharpguysweb.
Tags: AnalyticsisbeddelkaDataEmail MarketingDaacadnimowaqtiga
Tech lover oo dhisayay degello muddo 15 sano ah, la shaqeynta SaaS ee loogu talagalay 6, iyo xididdada kubbadda koleyga ee Indiana tan iyo markii aan ahaa 2.
Liiska Hubinta Dhiirrigelinta Boostaada
Soo-hel lacag-bixin leh oo la socota Xayeysiiska 'StumbleUpon'